FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA IMPERIALISTA SINOA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika imperialista sinoa
Apple the Imperial Shih Tzu amin'ny 2 taona milanja 8 pounds
Miniature Shih Tzu
Shih Tzu, karazana Princess
Tiny Teacup Shih Tzu
Tiny Toy Shih Tzu
Ny alika Imperialan'ny Sinoa dia toa ny kinova kely an'ny Shih Tzu . Ny endrika ivelany dia mamy, be maso ary tsy manan-tsiny. Alika mifatotra, tsara volom-borona ary misy hozatra miaraka amina akora mifanaraka amin'ny habeny izy io. Alika kely sy matanjaka io miaraka amin'ny vatana somary lava kokoa noho ny halavany. Boribory sy malalaka ny loha ary malalaka eo anelanelan'ny maso. Fohy ny vavam-boninkazo toradroa, miaraka amin'ny santimetatra na latsaka hatramin'ny tendron'ny orona mankany amin'ny fijanonana voafaritra. Malalaka ny orona, misy vavorona misokatra tsara. Ny orona, ny molotra ary ny molotra maso dia aty amin'ny alika miloko aty, manga amin'ny alika manga ary mainty amin'ny loko hafa rehetra. Mihaona amin'ny haavon'ny na manaikitra ny nifiny. Ny maso lehibe sy boribory dia mainty ny lokony, saingy maivana kokoa amin'ny alika manga sy aty. Mihantona ny sofina lehibe, pendant ary ambany volo ary rakotra volo be dia be. Ambony ny lamosina. Ny tongotra hozatra dia mahitsy sy tsara volony. Ny rambony avo lenta dia entina ambonin'ny lamosina ary rakotra volo be dia be. Esorina ny lalàma indraindray. Ny palitao roa sosona dia matevina sy lava, mikoriana amin'ny alika. Ny volo ambonin 'ny maso dia mifatotra anaty fonon-tànana matetika. Misy volombava sy volombava be dia be ary fohy ny volo eo amin'ny monotra. Ny palitao dia misy loko rehetra.
retriever volamena Terre-Neuve Mix alika
Ny tanjon'ny alika imperialista sinoa dia ny fiompiana manokana sy ny fianakaviana ary ny mpiara-mitory aminy. Alika kely mahery izy ireo, falifaly, milalao miaraka amina toetra feno fitiavana sy fitiavana izay mety amin'ny anjara asany eo amin'ny fiainana. Alika marani-tsaina, tia miresaka, matoky ary mavitrika izy ireo ary ho afa-po ihany koa hipetraka mangina eo am-pofoana raha mbola avela. Izy ireo dia mavitrika sy miara-miasa miaraka amin'ny fahaleovan-tena. Ny alika imperialista sinoa dia milalao sy mahery. Mila izy ireo mandeha isan'andro ny fonosana handoro hery ara-tsaina sy ara-batana. Alao antoka fa mafy orina ianao, azo antoka, tsy miovaova ity alika ity mpitarika fonosana hialana Syndrome kely alika , entanin'ny olombelona olan'ny fitondran-tena . Tadidio foana, alika dia canine fa tsy olombelona . Aza hadino ny mahita ny voajanahary voajanahary ho biby.
Haavony: ambanin'ny 9 santimetatra (23 cm)
Lanja: Latsaky ny 9 kilao (4,1 kg)
Hypoglycemia noho ny habeny. Mora tratran'ny aretina stifle sy hazondamosin'ny hazondamosina vokatry ny lamosina lava sy tongotra fohy. Ny aretin-tsofina koa, ny olan'ny maso toy ny maso serizy ary ny fahaverezan'ny nify aloha. Mora mitrongy sy mievoka ary mety hiteraka olana ara-pisefoana. Mora mahazo lanja ireo alika ireo ary tsy tokony ho be loatra.
Ny Dog Imperial an'ny Sinoa dia tena mpiara-dia aminy. Mahomby amin'ny trano an-trano rehetra izy io ary mitovy habe amin'ny trano.
10-15 taona eo ho eo
Ankizy 1 ka hatramin'ny 4 eo ho eo
Ireto alika kely ireto dia mila fikolokoloana tsara isan'andro amin'ny alika borosy. Rehefa tazonina anaty palitao lava dia voafatotra matetika ny lambam-pandriana mba tsy ho hitan'ny alika ny volony. Ny tompona sasany dia maniry ny hanaingoana azy ireo mba hanamorana ny palitao ary tsy handany fotoana hikarakarana azy ireo. Ataovy madio ny lalan'ny sofina sy ny faritra manodidina ny maso. Ny palitao dia azo haverina indray mandeha isam-bolana ka hatramin'ny enina herinandro. Raha tazonina lava ny palitao dia mila fandroana tsindraindray. Mila fikolokoloana sofina sy fikolokoloana mahazatra io karazany io. Ny alika imperialista sinoa dia manana maso mora tohina ka mila hadio hatrany. Misy latsaka manokana azonao vidiana apetraka ao anatiny raha ilaina izany. Anontanio ny mpitsabo bibyo izay hampiasaina amin'ny alikao. Ity karazana ity dia mandena kely tsy misy volo ary tsara ho an'ireo marary allergy raha voakarakara tsara ny palitao, noho izy ireo nandatsaka hoditra kely.
Ny alika Imperialina sinoa na Imperial Shih Tzu dia Shih Tzu izay niteraka kely kokoa noho ny fenitra an-tsoratra an'i Shih Tzu izay 9 kilao. Natomboka tamin'ny taona 1970 tany ho any izay nifidianan'ny mpiompy ny hazakazaka ho an'ny tahiry fitomboany. Mbola mitombo hatrany izy io ankehitriny.
asio alika rano espaniola
Ny Shih Tzu dia voalaza fa nidina avy niampita ny Lhasa Apso na alika an-tendrombohitra Tibetana ary Pekingese , tao an-tanànan'i Peking tamin'ny taonjato faha-17. Ny antontan-taratasy sy sary hosodoko tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo dia mampiseho alika mitovy amin'ny Shih Tzu. Ny alika no tian'ny mpanjaka Sinoa ary sarobidy tokoa ka an-taonany maro ny Sinoa no tsy nety nivarotra, nivarotra, na nanome na iray aza ny alika. Tamin'ny taona 1930 vao nampidirina tany Angletera ny mpivady voalohany, rehefa hitan'ny miaramila anglisy nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Ny Shih Tzu dia nekena tany Angletera tamin'ny 1946. Nankasitraka ny AKC ny AKC tamin'ny 1969. Ny anarana ' Imperial Shih Tzu 'na' Tiny Teacup Shih Tzu 'dia matetika ampiasaina hilazana ny Shih Tzu kely habe kokoa, mitombo kely noho ny fenitra voasoratra. Matetika antsoina hoe karazana andriambavy.
NCA = Fikambanan'ny kaninim-pirenena
CPR = Fisoratana anarana momba ny biby voamarina
'Ity i Izzy 9 taona sy efa lehibe. Milanja 4 1/2 pounds izy. Mafy sy tsara tarehy ny palitaony! '
'Izzy Bitsy Roberts ilay Alika Imperialan'ny Sinoa, 9 volana milanja 4 1/2 pounds, sary mipetraka eo akaikin'ny tavoahangy 20oz ho fampitahana ny habe!'
Izzy Bitsy Roberts ilay alika emperora sinoa amin'ny 5 volana— 'Izzy dia alika kely manga. Araka ny hitanao amin'ny sary (etsy ambany), ny fandokoana zaza teraka dia mety hamitaka! Izy koa dia manana fandokoana 'agouti' aseho amin'ny toro-hevitra mena. Amin'ity sary ity dia 5 volana izy ary milanja 3 pounds. Tsy manana olana ara-pahasalamana izy. Tena marani-tsaina sy be fitiavana izy. Ny palitaony dia misy onja kely saingy rehefa mihalava izy dia mihalalaka ny onja. Ny palitaony dia tsara tarehy ary ohatra tonga lafatra !!! '
Izzy Bitsy Roberts ilay alika imperialista sinoa amin'ny 5 volana
Izzy Bitsy Roberts ilay alika imperialista sinoa alika alika mandritra ny 12 herinandro
Izzy Bitsy Roberts ilay alika imperialista sinoa toy ny alika kely vao teraka miaraka amin'ireo mpiray tam-po aminy.
Alika Imperialy Sinoa
Alika kely mpanao ady totohondry 3 herinandro
Hijery ohatra misimisy momba ny alika imperialista sinoa
Sarin'ny alika imperialista sinoa
shar pei sy pit mix
Bulldog frantsay frantsay 6 volana
mifangaro i yorkshire sy shih tzu
amerikana bulldog 1 taona
afangaro ao anaty boaty ny omby